Ukwahluka: iibhanki vs umbane | Ezezimali
Ukwahlukahlukana: iibhanki vs zombane
Kunqabile ukuba kubekho umahluko omkhulu kangaka phakathi kwamaxabiso ezinto ezibhankini kunye nombane. Apho bathatha iindlela ezahlukileyo ngokupheleleyo kwiiseshoni zokurhweba eziphuhlileyo ukusukela ekuqaleni konyaka. Abahlali ezantsi kweendlela phantsi kwendlela efanayo, kude nayo. Ezi zixabiso esinokuthi zichasene nazo zonke iimbono, njengoko kuboniswa kunye nokwakhiwa kwamaxabiso abo kwiinyanga zokuqala zonyaka omtsha.
Kwelinye icala, kufanele ukuba kukhunjulwe ukuba kunyuso lwamva nje kwiimarike ze-equity, ukonyuka kukhokelwe yiCaixabank, ethe yaxabisa nge-4,63%. I-BBVA ene-4,15% okanye iSantander ene-3,50%. Ngokuchasene noko, kwicala lolungiso, i-Enagás ibekwe nge-1,31%, iRed Eléctrica yehle nge-1,13%, Iberdrola 0,81% kunye ne-Endesa phantse isiqingatha sepesenti. Kwindlela eye yahlala izinzile xa oku kwenzekileyo kwiimarike zezabelo.
Ngelixa ngokuchaseneyo, kuqhelekile ukuba iinkampani zombane zitsale, ngamanye amaxesha ngenkani, isalathiso esikhethiweyo sengeniso yaseSpain, i-Ibex 35, ngamaxesha aphindaphindeneyo. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba baninzi abasebenzisi kwiipaki zikazwelonke abo balebhelayo, ngobabalo oluthile, la maxabiso "njengenja kunye nekati." Abafane badibane kwimidla yecandelo labo kwiiseshoni zokugqibela zokurhweba.
1 Iibhanki vs umbane: kwingxabano
2 Ngawaphi awona maxesha abalungileyo?
3 Umahluko wakho kukungazinzi
4 Idityaniswe kwiitshipsi eziluhlaza
Iibhanki vs umbane: kwingxabano
Ngokwenyani ngamacandelo kwizabelo ezinomdla wokwenene ochasene kwasekuqaleni njengoko siza kubona ukusukela ngoku. Kwaye kuyo nayiphi na imeko, zijolise kwiiprofayili ezahlukeneyo ngokupheleleyo zabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngelixa kwezi zixabisekileyo zecandelo lebhanki zijolise kuhlobo olunobukhali ngakumbi lokugcina, okufanayo akwenzeki neenkampani zombane. Ukuba akunjalo ngokuchaseneyo, bangabona baboneleli abatyali-mali abalondolozayo okanye abakhuselayo abafuna ukugcina imali yabo ngaphezulu kwezinye izinto ezigwenxa.
Kwelinye icala, kufanelekile ukugxininisa ukuba la macandelo mabini emarike yemasheya ahamba kwiinkqubo ezahlukeneyo ngokwendlela ahamba ngayo. Kwicandelo lebhanki ngokucacileyo li-bearish okwangoku, ngelixa ngokuchasene noko kuluncedo kwahluke kakhulu. Oko kukuthi, phantsi kwenqanaba elinamandla kakhulu, ubuncinci okomzuzwana. Ukudityaniswa kwamandla abo kuya ngendlela yabo kwaye le yinto edla ngokudida indawo elungileyo yabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngaphandle kwezinye izinto zobugcisa.
Ngawaphi awona maxesha abalungileyo?
Enye yezona zinto zibalulekileyo kula macandelo kuhlalutyo lwawo kuxa kulungele ukuwaqesha ukuze enze ingeniso yokonga. Ewe, akukho mfihlakalo mininzi yokufikelela kwisigqibo esicacileyo ngayo. Kula maxesha abanzi oqoqosho apho ukhuseleko lwecandelo lebhanki lunokwenza ngcono. Njengakwimeko yokunyuka kwenqanaba lenzala kuba iya kufana nento yokuba baya kuvelisa inzuzo ngakumbi ekusebenzeni kwabo. Ngokusisiseko ngokufumana ikhontrakthi kwalo naluphi na uhlobo lwenkxaso mali.
Ngelixa ngokuchaseneyo, amaxesha okudodobala kwezoqoqosho zezona zinomdla ekuphuhliseni ukunyuka okunamandla kwiimarike zezabelo ngamaxabiso emarike yemasheya kwicandelo lombane. Akumangalisi ukuba beze basebenze njengendawo ekhuselekileyo ngamanye amaxesha okungazinzi okukhulu kwimarike yemasheya kunye nokwandiswa kuqoqosho. Ngeziphumo ezilungileyo kakhulu kwaye ngaphandle kwamathandabuzo kunokumangalisa ngaphezulu kotyalomali oluncinci okanye eliphakathi. Ukusukela kwelinye icala, banezinye zezabelo eziphezulu kwizabelo zamashishini ezesizwe. Ngemida yokulamla enokufikelela kwinqanaba le-7%.
Umahluko wakho kukungazinzi
Enye into eyahlula kakhulu icandelo lebhanki kunye nombane kukungazinzi kokulungelelaniswa kwamaxabiso abo. Akumangalisi ukuba kweyokuqala ihlala iphakame kakhulu, umahluko obaluleke kakhulu phakathi kwamaxabiso aphezulu kunye neyona nto incinci kwaye ngenxa yoko inqweneleka ngakumbi ukwenza imisebenzi yorhwebo okanye kwiseshoni efanayo yorhwebo. Ngenxa yoko, umngcipheko wabo uphezulu kwaye nangona kunokuba luncedo ngakumbi, zichaphazela ukuba abatyali mali banokushiya ii-euro ezininzi apha endleleni. Kubaluleke kakhulu ukuba uhlalutye lo mbandela ukuze ungafumani ngaphezulu kwesimanga esinye ukusukela ngoku.
Kwelinye icala, amaxabiso ecandelo lezombane azinzile ngokubhekisele kwixabiso elibekwe zizabelo zalo. Ngale ndlela, ukunyuka kwabo kulawulwa ngakumbi ngabatyali zimali zentengiso kuba kunqabile ukuba behle okanye baxabise ngezantsi kweepesenti ezi-2. Lo ngumbandela onika uxolo olukhulu lwengqondo kubasebenzisi besitokhwe abalondolozayo. Ukuya kwinqanaba lokuba bathenga olu didi lwezabelo ukwenza ibhegi yolondolozo oluzinzileyo yexesha eliphakathi nelide. Nokuba kwenzeka ntoni kwiimarike zezabelo.
Idityaniswe kwiitshipsi eziluhlaza
Ngayiphi na imeko, enye yezona zinto zixhaphakileyo kumacandelo emarike yemasheya kukuba amanye amalungu ayo ayinxalenye yeetshipsi eziluhlaza zaseSpain. Oko kukuthi, iinkampani ezinemali ephezulu kakhulu kwaye ezineeakhawunti zeshishini ezithathwa njengezizinzileyo.
Ngobutyebi obukhulu kwiintshukumo ukuze kube lula kakhulu ukungena kunye nokuphuma kwiimarike zemali ngexabiso elilungelelanisiweyo ngakumbi. Apho kungekho namnye amatyala oya kubanjwa kwizikhundla zakho. Ayothusi into yokuba umthamo weekhontrakthi kuwo omabini amacandelo uphezulu kakhulu kwaye nakweyiphi na imeko ungaphezulu kunalawo amanye amacandelo eshishini adweliswe kwimarike yemasheya. Yintoni isiqinisekiso semidla yayo nayiphi na iprofayili kutyalo-mali. Nokuba kwenzeka ntoni kwiimarike zezabelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Ukwahlukahlukana: iibhanki vs zombane
Uninzi lweenkonzo ezimele ezinxulumene neakhawunti yentlawulo
Iindlela zokujongana notyalo-mali ngaphambi kokufika kwehlobo